SAWIRRO: Musharraxiin u taagan Xilka Madaxtinimada Galmudug oo Isbaheysi kaga dhawaaqay Dhuusamareeb | HalQaran.com
Home Wararka Maanta SAWIRRO: Musharraxiin u taagan Xilka Madaxtinimada Galmudug oo Isbaheysi kaga dhawaaqay Dhuusamareeb
SAWIRRO: Musharraxiin u taagan Xilka Madaxtinimada Galmudug oo Isbaheysi kaga dhawaaqay Dhuusamareeb
Dhuusamareeb (Halqaran.com) – Iyadoo ololaha doorashada maamulka Galmudug uu iminka marayo meel gabagabo ah, ayaa Arbacadii maanta waxaa isbaheysi magaalada Dhuusamareeb kaga dhawaaqay saddex ka mid ah musharraxiinta u taagan xilka madaxweynaha Galmudug.
Saddexda Musharrax oo kala ah, Cabdiraxmaan Odowaa, Kamaal Guutaale iyo Cabdullaahi Faarax Wehliye oo maanta warbaahinta la hadlay ayaa ku dhawaaqay in ay isbaheysi sameysteen.
Xubnahaan ayaa lagu sheegay murashaxiinta mucaaradka ee kasoo horjeeda tartamaha ay wadato Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya.
Kulanka Saddexdan Musharrax madaxweyne ayaa waxay ku ballameen in kii Cod badiyaa kuwa kale ugu shubaan.
Arrintan ayaa noqoneysa dhabar jebin lala rabo Murashaxa Xukuumada Soomaaliya wadato ee Axmed Cabdi Kaariye (Qoor qoor) oo ay umuuqato in lala gedin rabo Doorashada xilka madaxtinimada Galmudug.
Si kastaba ha’ahaatee, DF Soomaaliya ayaa dhaqaale xooggan ku bixineysa sidii Qoor-Qoor loo soo dooran lahaa, iyadoo Xildhibaanada Lacag badan la siinayo si ay codkooda Kaariye ugu shubaan.
codka oo lacag looga iibsanayo Xildhibaanada
Musharraxiin Galmudug oo isbaheysi kaga dhawaaqay Dhuusamareeb